Zavatra 7 tokony hatao amin'ny dia any Aostralia | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Aostralia, General, Oseania
Isaky ny mankany amin'ny toerana itodiana isika manana zavatra ilaina ao an-tsaina isika mitsidika na hanao. Raha mankany Paris isika dia tsy maintsy mahita ny Louvre sy ny Eiffel Tower, any London Big Ben ary any Rome the Colosseum. Zavatra izay tsy tokony holalovantsika mihitsy satria tsy fantatsika raha hitsidika an'io firenena na tanàna io indray isika. Mazava ho azy fa iray amin'ireo izay manandrana manao hetsika aho ary mahita izay zavatra mahaliana rehetra.
Raha milaza isika Aostralia, toerana iray mahatonga ahy hitia, ny tena izy dia manana ny lisitry ny zavatra ho hitantsika sy hatao izay tena mahaliana. Ny sasany dia toa miharihary aminao, ny hafa tsy dia be loatra, ary izany no antony naniriako nanangona ny zavatra rehetra tiako hatao raha indray andro any manana ny fahafahako manitsaka ao amin'io firenena io feno zavatra hafa sy mahatalanjona.
1 Tsidiho sydney
2 Ny sakana lehibe amin'ny haran-dranomasina
3 Fitsangantsanganana any amin'ny valan-javaboary Kakadu
4 Jereo ny biby aostralianina
5 Mivezivezy amin'ny làlan'ny Ranomasina Lehibe
7 Milalaova Didgeridoo any Aostralia
Mazava ho azy fa misy maro zavatra hatao ao sydney, na dia tsy tokony hohadinoina aza fa ny renivohitra dia Canberra. Ao anatin'izany no hakantsika sary ny fahasarotana eo alohan'ny opera malaza miaraka amin'ny maritrano mahavariana, mampakatra azy amin'ny tambajotra sosialy ary mampiseho izay misy antsika. Misy ihany koa zavatra mahafinaritra hafa tokony hatao any Sydney, toy ny fitsidihana ny morontsiraka an-tanànan'ny Bondi Beach malaza, na ny fitsidihana ny Harbour Bridge, na The Rocks, ilay faritra tranainy indrindra.
Ity dia iray amin'ireo haran-dranomasina kanto indrindra, izay misy hetsika maro ihany koa. Jereo ireo sokatra manao akany Iray amin'izy ireo, saingy misy ihany koa ny antsitrika, iray amin'ireo fanatanjahantena izay tsy tokony hatsahatrao mihitsy ny hanao amin'ny toerana toa izao. Ny haran-dranomasina sy trondro maro loko dia hita eny amin'ny fanambanin'ny ranomasina mahavariana. Azonao atao ihany koa ny mandray sidina avy eny amin'ny rivotra, hahafahanao mahita ny sakana amin'ny fomba fijery hafa tanteraka.
Fitsangantsanganana any amin'ny valan-javaboary Kakadu
Betsaka ny faritra efitra any Aostralia, ary Kakadu National Park dia iray amin'izany, izay misy zavatra maro tokony hatao. Hatramin'ny nahitanao ny galeria misy zavakanto aboriginaly hamakivaky ny faritra mando hahitanao ny vorona ary koa ny voay tsindraindray, satria tsy azontsika lavina fa io no iray amin'ireo biby tiana ho hita rehefa mankany Aostralia isika.
Jereo ny biby aostralianina
Eny, misy biby maro izay hita ao Aostralia ihany. Avia, teratany izy ireo. Ny koala, ny kangaroo, ny platypus na ny tranon-jaza ny sasany amin'izy ireo, tsy isalasalana fa ny malaza indrindra. Sarotra ny mahita azy ireo amin'ny fonenany voajanahary, ka afaka mandeha any amin'ny tahiry sy valan-javaboary voajanahary ianao. Amin'ireto toerana ireto dia ho hitantsika izy ireo amin'ny toeram-ponenana voaaro ary hanana traikefa lehibe isika. Mora hita ny tranon-jaza ao amin'ny Blue Mountains National Park, ary ny koala ao amin'ny Cleland Natural Park.
Mivezivezy amin'ny làlan'ny Ranomasina Lehibe
Raha miresaka momba ny Làlan'ny Ranomasimbe Lehibe isika dia mety tsy dia mahazatra azy io, fa raha milaza aminao izahay fa làlana mamaky ny Apôstôly Roambinifolo malaza Azoko antoka fa efa liana kely kokoa ianao. Ary ankoatran'ireo firafitr'ireo vatolampy lehibe ireo izay mampatsiahy antsika ny Playa de las Catedrales ao Lugo, dia misy zavatra maro hafa hita amin'ity fitsangatsanganana fiara mahaliana amoron-dàlana ity izay manamorona ny morontsiraka. Ny morontsiraka misavoana toa an'i Bells Beach, na ny tontolon'ny tendrombohitra Grampians, izay lavitra kokoa mankany afovoan-tany dia toerana tokony haleha.
Ity dia iray amin'ireo tandindon'i Aostralia. Ny vatolampy lehibe any Uluru dia toerana masina sy manan-danja ihany koa ho an'ny kolotsaina aboriginal, voahodidin'ny angano taloha. Betsaka ny fomba hankafizana ny Ivontoerana Mena any Aostralia, ny valiny any ivelany tena izy. Ity vatolampy ity dia ao amin'ny Valan-javaboary Uluru-Kata Tjuta, ary afaka mandeha an-tongotra miaraka amin'ny torolàlana Aboriginal ianao izay hilaza aminao momba ny fomba amam-panao taloha. Azonao atao koa ny mitaingina ny efitra amin'ny rameva na i Harley-Davison.
Milalaova Didgeridoo any Aostralia
Mety tsy dia hainao mihitsy io teny io, fa ilay fitaovana ampiasain'ny aborigines hatrizay dia namboarintsika tamin'ny vatan-kazo, mazàna eucalyptus. Izy io dia mamoaka feo lalina sy ambany ary mamiratra, izay nanjary toetra mampiavaka ny Kolontsaina aostralianina sy aboriginal. Azonao atao ny mahita mora ny fananahana any amin'ny faritra fizahan-tany, mba hitondrana trano kely iray. Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny mankany amin'ny toerana izay ahalalany ny kolontsaina Aborigine sy hanaovana fihetsiketsehana. Ao amin'ny Padakul Aboriginal Cultural Tours dia mikarakara fitsidihana ny tanin'ny Limilngan, akaikin'i Darwin izy ireo. Amin'ity toerana ity dia azo atao ny mahita fampisehoana mozika nentin-drazana miaraka amin'i didgeridoo, mba hampianaran'izy ireo anay hitendry azy tsara, ary izy ireo koa dia manao harona sy harona nentim-paharazana antsoina hoe kitapo dilly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Zavatra 7 tokony hatao amin'ny dia any Aostralia